बन्द भयो थारू नमुना ग्राम - Pradesh Today
Homebreaking-newsबन्द भयो थारू नमुना ग्राम
घोराही, १८ फागुन । खरले छाएको छानो, त्यो फेर्ने कसले ? भत्किनै लागेको घर, त्यो पोत्ने कसले ? घर वरिपरी झारैझारले ढाकिएको छ । त्यो सफा गर्ने कसले ?
यस्तै हविगत देखिएको घर कुनै सामान्य होइन् । न कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको घर नै हो । जो थारू समुदायको परम्परागत घरको नमुना हो । त्यो घरमा थारूको देवता राखिएको छ । तर उचित सम्भार छैन ।
थारू समुदायले प्रयोग गर्ने भाँडा, अन्न राख्ने डेहरी, धान कुट्ने ढिकी, पिस्ने चाकी, कृष्ण अष्टमीमा पूजा गरिने अष्टिमकी छ । तर कोही जादैन् त्यहाँ । थारू समुदायले प्रयोग गर्ने नमुनाको रूपमा डेल्या, हेल्का, टापी छन् ।
ति व्यवस्थित छैनन् । थारू समुदायका गहना, पोशाकहरू पनि छन् तर प्रयोगमा छैनन् । दाङको सिङ्गो थारू समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ सिसहनियामा निर्माण गरिएको नमुना थारूग्राम हो ।
थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको र मौलिक संस्कृति सम्पदाको पनि धनी मानिएको थारू समुदायकै लागि निर्माण गरिएको थियो नमुना थारूग्राम । यो नमुना थारूग्राम निर्माण भईसकेको डेढ दशक बितिसकेको छ ।
तर निरिह जस्तै बनेको छ । तुलसीरको चखौरामा नमुना थारूग्राम निर्माण भएको धेरै समय भएको छैन् । तर पर्यटन व्यवसायको रूपमा विस्तार हँुदैछ । तर घोराही सिसहनियामा रहेको नमुना थारूग्राममा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन् ?
नमुना थारूग्राम निर्माण भएको वडा अध्यक्ष पनि चौधरी नै छन् भने घोराही उपमहानगर–पालिकाका प्रमुख नरूलाल पनि चौधरी समुदायकै हुन् । तर यसको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा नमुना थारूग्रामको निर्माण भएको थियो । तर अहिले सुनसान छ, त्यो नमुना ग्राम । ‘२०६५ साल हो । यो थारूग्राम निर्माण भएको ।
त्यो समयमा सरकारी र गैर सरकारी गाडीमा चढेर ठूला–ठूला सर मेडमहरू आउनुभयो । थारू संस्कृतिको भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउनुभयो । त्यहाँ हाम्रो भिडियो पनि बनाउनुभयो । यो थारूग्राम र संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिन भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो ।’
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का जनक चौधरीले नमुना थारूग्राम निर्माण गर्दाको पल यसरी सम्झन्छन् । चौधरी नमुना ग्रामको सदस्य पनि हुन् ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा नमुना थारूग्राम बनाउने योजना भएको थियो । तत्कालीन समितिको सहयोगमा ३ लाखमा ५ जना थारू समुदायको नमुना घर बन्यो ।
२०६५ साल चैत १४ गते थारू नमुना घरको भव्यरूपमा उद्घाटन गरियो । त्यहाँ सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, प्रमुख, राजनीतिक दललगायतका सबै भव्यरूपमा सहभागी भए ।
‘नमुना थारूग्रामको अनुसार नै अनदीको रोटी, जाड, लोकल भाले खुवायौँ र पठायौ’ थारू ग्रामका सदस्य जनक चौधरीले त्यो पल सम्झदै भने ‘थारूग्रामको विकास गर्नुपर्छ,
यसको प्रवद्र्धनको लागि सहयोग गर्छौ भनेर आश्वासन दिनुभयो तर कहिले फर्कनु भएन् ।’
नमुना थारूग्राम निर्माण भएको समयमा जिल्लास्तरदेखि केन्द्रीय राजधानीका समेत संस्कृतविद् आएर डकुमेन्ट्री बनाएर लगेको चौधरी अझै सम्झन्छन् ।
‘त्यो समयमा निकै चहल पहल थियो, ठूला–ठूला मान्छेहरू आउँदा निकै खुशी लाग्थ्यो’ उनले दुखेसो पोख्दै भने ‘हामी त नमुना ग्रामलाई सहयोग गर्न आउनुभएको होला भनेर खुशी भयो,
आफ्नो डकुमेन्ट्री, स्टोरी बनाउन पो आउनु हुँदोरहेछ ।’ करिव पाँच विगाह सरकारी जग्गामा पाँचवटा थारू समुदायको नमुना घर छन् ।
थारू नमुना ग्रामका अध्यक्ष वेझलाल चौधरीले नमुना थारूग्राम निर्माणको लागि शुरूमा ३ लाखको सहयोग आएपनि त्यसपछि कसैले सहयोग नगरेको बताए ।
‘हामी थारू समुदायले श्रमदान गर्न सक्छौँ, होमस्टे बनाउनको लागि बजेट छैन्’ उनले भने ‘नमुना थारूग्राम त भयो तर पाहुना बस्नको लागि जस्तो भएन् ।’
थारू कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष भुवन चौधरीले नमुना थारूग्राम हेर्नको लागि मात्रै भएकाले त्यसको प्रयोगमा आउन नसकेको बताए ।
त्यहाँका थारू समुदायका युवाहरूलाई होमस्टे सम्वन्धी तालिम दिनको लागि घोराही उपमहानगरसँग अनुरोध गरेको बताए । थारू नमुना ग्राम व्यवस्थापनलाई सक्रियरूपमा परिचालन गरेर लाईट स्टेको रूपमा लैजाने योजना बनाएको उनले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष खोपीराम चौधरीले प्रत्येक वर्ष एक लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको जानकारी गराए । ग्रामलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि घोराही नगरसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ थियो ।
घोराही उपमहानगरपलिकाका प्रमुख नरूलाल चौधरीले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हालको जिल्ला समन्वय समितिले निर्माण गरेको नमुना थारूग्राम भएको बताए ।
अब चाँडै नै घोराही उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको जानकारी गराए । ‘समन्वय समितिले नै बनाएकाले उसैको मातहतमा थियो’ नगर प्रमुख चौधरीले भने ‘अब योजना बनाएर चाँडै नै त्यसको व्यवस्थापन गर्छौ ।’